Liiska Waa In Uu Yahay Nuxurka KASTA OO B2B Ganacsi Ugu Baahan Yahay Inuu Cuno Safarka Iibsadaha | Martech Zone
Isweydaarsiga Suuqgeynta B2B: Heerka-xiga ABM | Shirka Onlineka | Juun 7-10, 2021
Waa igu wareertay in B2B Marketers ay had iyo jeer geyn doonaan tiro ololeyaal ah waxayna soo saari doonaan qulqulo aan dhammaad lahayn oo ka kooban ama cusbooneysiinta warbaahinta bulshada iyada oo aan la helin ugu yar aasaasiga ah, si fiican loo soo saaray maktabadda in rajo kasta ay raadineyso markii ay baarayaan lamaanahooda xiga, wax soo saarkooda, adeeg bixiyahooda, ama adeegooda. Saldhigga waxyaabahaagu waa inay si toos ah u quudiyaan adiga safarka iibsadayaasha. Haddii aadan sameyn… tartamayaashaaduna ay sidaas sameeyaan… waxaad waayi doontaa fursaddaadii aad ku abuuri lahayd ganacsigaaga xalka ugu habboon.
Akhri Waxbadan oo Ku saabsan Marxaladaha Safarka Iibsadaha B2B
Macaamiil kasta oo B2B ah oo aan caawiyo, marwalba waxaan u arkaa saameyn muuqata oo ku saabsan waxqabadkooda suuq geynta marka aan si cad oo qeexan u bixinno qaybahaan muhiimka ah:
Rajooyinku waxay rabaan inay sifiican u fahmaan dhibaatada ay raadinayaan xalka intaan Xitaa raadsan xalka. Sameynta naftaada hay'ad si buuxda u fahamsan dhibaatada iyo saameynta ay ku leedahay macaamiisha waa hab awood leh oo lagu dhisi karo wacyigaaga astaantaada marxaladda ugu horreysa ee Safarka Iibsiga B2B.
Qeex dhibaatada - Soo bandhig muuqaalka guud, isbarbardhiga, jaantusyada, iwm ee ka caawinaya sharraxaadda caqabadda gebi ahaanba.
Samee qiime - Ka caawi rajada inay fahmaan qiimaha dhibaatadaas ganacsigooda iyo sidoo kale kan Qiimaha fursad ganacsigooda marka dhibaatada la saxo.
Research - Ma jiraan ilo cilmi-baaris oo labaad oo si buuxda u diiwaangeliyey arrintan oo bixiya tirakoob iyo qeexitaanno heerar ah oo ku saabsan dhibaatada? Ku darista xogtaan iyo ilahaani waxay xaqiijineysaa iibsadaha suurtagalka ah inaad tahay ilo aqoon leh. Cilmi-baarista aasaasiga ahi waa mid cajiib ah sidoo kale… badanaa waa la wadaagaa waxayna dhisi kartaa wacyigelin ku saabsan astaantaada maadaama iibsadayaashu ay baaraan dhibaato.
Tusaale: Isbeddelka Dijital ah waa habka ay shirkaduhu ugu dhexgalaan xalalka dijitaalka ah dhinac kasta oo ganacsigooda ah si ay u qabsadaan faa'iidooyinka isbeddellada dhijitaalka ah isla markaana ay uga hor mariyaan tartamayaasha. Gudaha, waxaa jira keydinta otomaatiga, hagaajinta xogta saxda ah ee go aan qaadashada fiican iyo dhaqsaha badan, faham buuxa ee macaamilka, jahwareerka shaqaalaha ayaa yaraaday, iyo hagaajinta warbixinta si loo fahmo sida qayb kasta oo ganacsigu u saameynayso guud ahaan caafimaadka ganacsiga. Dibedda, waxaa jira fursad lagu wadi karo haynta, qiimaha macmiilka, iyo guud ahaan iibka iyadoo awood loo leeyahay in lagu baaro laguna hagaajiyo khibrada macmiilka siyaabo cusub oo cusub. McKinsey waxay soo bandhigtay falanqeyn faahfaahsan oo tilmaamaysa 21 habdhaqan ee ugufiican hogaaminta, dhisida awooda, awood siinta shaqaalaha, casriyeynta aaladaha, iyo isgaarsiinta wadida isbadalada dhijitaalka ah ee guuleysta.
Filashooyinku waxay noqon karaan kuwo aan ka warqabin dhammaan xalalka ay heli karaan lagamana yaabo inay si buuxda u fahmaan sababta maalgashiga barxad ama adeeg dibadeed ay uga faa'iideysan karto iyaga. Liis daacad ah, oo faahfaahsan oo xalal ah ayaa muhiim u ah in lagu wargaliyo iibsadayaasha mustaqbalka iyadoo faham buuxa laga helayo xulashadooda iyo faa'iidooyinka, qasaaraha, iyo maalgashiga looga baahan yahay mid kasta. Mar labaad, tani waxay ku asaasi doontaa bilowga hawsha go'aan qaadashada waxayna kaa caawinaysaa rajada inaad ogaato inaad fahamsan tahay dhammaan xulashooyinka.
Do-It-Yourself - Faahfaahinta sida macmiilku u qaban karo shaqada laftoodu kama fogeynayo xalkaaga, waxay siineysaa sawir cad oo ku saabsan ilaha iyo waqtiga loo baahan yahay in lagu dhammaystiro shaqada naftooda. Waxay ka caawin kartaa inay daaha ka qaadaan nusqaamaha tayada, filashooyinka, miisaaniyadda, jadwalka waqtiga, iyo wixii la mid ah… waxayna ka caawin kartaa inay dhab ahaan ku riixaan wax soo saarkaaga ama adeeggaaga beddel ahaan. Ku dar ilaha dhinac saddexaad ee aad ku kalsoon tahay oo caawin kara iyaga.
Products - Teknolojiyadaha caawin kara ururka isla markaana bogaadin kara wax soo saarkaaga iyo adeegyadaada waa in si buuxda loogu faahfaahiyay xilligan. Uma baahnid inaad u tilmaantid tartame, laakiin waxaad si guud uga hadli kartaa sida badeecad kastaa ay uga caawiso sixitaanka dhibaatada aad ku qeexday waxyaabaha ku saabsan aqoonsiga dhibaatada. Mid ka mid ah halkan ayaa ah inaad si buuxda u qeexdo faa'iidooyinka iyo qasaaraha soo saar kasta, oo ay ku jiraan kuwaaga. Tani waxay kaa caawin doontaa rajadaada marxaladda soo socota, dhismaha shuruudaha.
adeegyada - Sheegida inaad qaban karto shaqada kuma filna. Bixinta dulmar guud oo faahfaahsan oo ku saabsan habka iyo nidaamka aad bixiso ee ah mid waqti la tijaabiyey oo si dhammaystiran u faahfaahsan waa waajib.
Kala-soocid - Tani waa wakhti ku habboon in lagu kala saaro meheraddaada kuwa kula tartamaya! Haddii tartamayaashaadu leeyihiin kala duwanaansho aad lumineyso, tani waa waqti ku habboon in la yareeyo saameynta faa'iidadaas ay yeelan karaan.
Natiijooyinka Bixinta sheekooyinka isticmaalaha ama daraasadaha kiisaska si ay si buuxda ugu muujiyaan hannaanka iyo heerarka guusha ee xalalkan ayaa muhiim ah. Daraasad aasaasi ah iyo mid sare oo ku saabsan heerarka guusha, natiijooyinka la filayo, iyo soo noqoshada maalgashiga ayaa halkaan waxtar leh.
Tusaale: Shirkaduhu inta badan waxay hirgeliyaan xallinta iyagoo rajeynaya inay dijitaal ahaan u beddelaan, laakiin isbeddelka dhijitaalka ah wuxuu u baahan yahay dadaal badan oo ka dhex jira urur. Hoggaamintu waa inay lahaato aragti cad oo ku saabsan sida shirkaddoodu u shaqeyn doonto iyo sida ay macaamiishoodu u awoodi doonaan inay la falgalaan marka ay shirkaddu gaarto heer isbeddel dijitaal ah.
Nasiib darro, McKinsey waxay bixisaa xog in ka yar 30% dhammaan shirkadaha ay ku guuleystaan ​​inay u beddelaan ganacsigooda dijitaal ahaan. Shirkaddaadu waxay ku duri kartaa hibo si ay uga caawiso hawsha, waxay ku duri kartaa la taliyayaal inay kaa caawiyaan, ama ku tiirsanaadaan aaladaha aad horumarineyso. Awoodda cirbadeynta waxay u baahan tahay heer qaan gaar ah oo ganacsiyada badankood ay la halgamaan maaddaama ay jirto iska caabin dabiici ah oo gudaha lagu beddelo. La-taliyayaasha sida joogtada ah uga caawiya ganacsiyada isbadelkooda dhijitaalka ah waxay si buuxda u fahmayaan halista, sida loo dhiso iibsiga, sida loo odoroso mustaqbalka, sida loo dhiiri galiyo loona dhiso qanacsanaanta shaqaalaha, isla markaana loo kala hormariyo isbadalka dhijitaalka ah ee guusha. Dulucda ayaa mararka qaar waxtar leh, laakiin khibradooda iyo diiradooda had iyo jeer lama jaanqaadi karaan warshadahaaga, xoogsatadaada, ama heerka qaangaarnimadaada.
Iyadoo tobaneeyo sano oo waayo-aragnimo ah, our Isbadal digital ah hawsha ayaa lagu sifeeyay wejiyo kala duwan si loo wado isbeddelkaaga dhijitaalka ah - oo ay ku jiraan helitaanka, istiraatiijiyadda, horumarinta xirfadda, hirgelinta, hijrada, fulinta, iyo hagaajinta. Waxaan dhawaan badalnay hay'ad samafal qaran, si buuxda u haajirnay oo aan u hirgelinay xalka shirkad, waxaan horumarinay shaqaalahooda, waxayna awoodeen inay horumar ka gaaraan miisaaniyada iyo ka hor jadwalka, si buuxda u ogaano soo laabashadooda maalgashiga.
Shirkad yar ahaan, shirkaddaadu had iyo jeer waxay mudnaan siin doontaa la-hawlgalayaashayada. Hogaamiyaasha aad kula kulmi doonto wareegga iibka waa isla dadki wadi doona isbeddelkaaga dhijitaalka ah ee guuleysta.
Haddii aad ka caawin karto rajadaada iyo macaamiishaada inay qoraan shuruudahooda, waad ka hormari kartaa tartankaaga adoo iftiiminaya awooda iyo faa'iidooyinka dheeraadka ah ee la shaqeynta ururkaaga.
Dadka - Bixiyaa faham cad oo ku saabsan kartida, khibrada, iyo / ama shahaadooyinka lagama maarmaanka u ah sixitaanka dhibaatada. Marka laga soo tago kuwaas oo ayaa loo baahan yahay, sidoo kale ku dar dadaalka lagama maarmaanka u ah hagaajinta dhibaatada. Shirkaduhu badanaa kama badna culeys si ay ula tacaalaan hirgelinta, marka dejinta rajooyinka heerka dadaalka iyo sida badeecadaada ama adeeggaaga ay u yareyn karto baahidaas ururka ka jirta ayaa caawin doonta.
Qorshaha - Ku soco rajadaada hanaanka aad ku soo saartay wajiga xalka si aad u hubiso inay saadaalin karaan jadwal ay la socdaan ilaha aadanaha iyo teknoolojiyada ee looga baahan yahay inta lagu jiro. Ka caawi iyaga inay mudnaanta siiyaan hirgelinta si loo gaaro soo-celinta ugu weyn ee maalgashiga marka hore iyadoo loo sii socdo himilooyinka muddada-dheer ee saxitaanka dhibaatada.
Risk - Heshiisyada Heerka Adeegga, u hoggaansanaanta sharciyeynta, shatiyeynta, amniga, dib u soo celinta, qorshooyinka shaqo ka joojinta… shirkaduhu inta badan waxay dhisaan shuruudo gaar u ah dhibaatada laakiin waxay ka hadlayaan arrimaha khalkhal gelin kara dadaalkooda ku aaddan hirgelinta xalka
Kala-soocid - Haddii aad haysato faa iido rasmi ah oo ka soo horjeedda kuwa kula tartamaya, waa in gabi ahaanba lagu daraa shuruudahaan si markaa loo kala hormariyo rajadaada. Shirkadaha badanaa wey lumiyaan ama ku guuleystaan ​​fursad ku saleysan hal arrin.
Tusaale: Download warqaddeena guud iyo liiska hubinta ee ku saabsan sida loo beddelo ganacsigaaga. Dhexdeeda, waxaan si buuxda u qeexeynaa ilaha aadanaha, qorshaha guud ee wajiga, iyo sidoo kale sida loo yareeyo halista guuldaraysiga isbeddelkaaga dhijitaalka ah.
Meelkasta oo dadku xal raadinayaan, meheraddaadu waa inay goobjoog ahaataa. Hadday taasi tahay natiijooyinka raadinta ee ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah, waa inaad kujirtaa darajo. Haddii taasi ay tahay daabacaadda warshadaha, waa inaad joogtaa. Haddii dadku cilmi baaris ku sameeyaan oo ay xalka ku helaan saameeye, saamayntaas waa inay ka warqabtaa awoodahaaga. Iyo… haddii dadku ku baaraan sumcaddaada khadka tooska ah, waa inay jiraan raad talooyin, dib-u-eegis, iyo ilaha bixiya rajadaas oo ah inaad tahay ikhtiyaarka ugu fiican ee ay haystaan.
Authority - Ma joogtaa guud ahaan inta mushahar, kasbatay, wadaag, iyo milkiyadba leh? Hadday tahay raadinta YouTube ee dhibaatada, warbixin falanqeeye ku saabsan warshadahaaga, ama xayeysiin ku socota daabacaadda warshadaha… ma joogtaa?
Aqoonsiga - Ma laguu aqoonsaday dhinac saddexaad si aad u hesho shahaadooyin, abaalmarino, maqaallo hoggaamineed oo laga fikiro, iwm. Dhammaan aqoonsiga warshaduhu wuxuu siiyaa iibsadayaasha kalsooni iyo kalsooni markay qiimeeyaan alaab-qeybiyeyaasha.
Aqoonsiga - Miyaad si firfircoon ula socotaa oo uga jawaabaysaa tixraaca bulshada, qiimeynta, iyo dib u eegista alaabtaada iyo adeegyadaada khadka tooska ah? Haddii aadan ahayn oo kuwa kula tartamaya ay yihiin, waxay umuuqataa in ururkoodu aad uga jawaabo… xitaa haddii dib u eegistu ay taban tahay!
waxkabadalka - Daraasado kiisaska shaqsiyadeed iyo qayb ahaan iyo markhaatiyada macaamiisha ayaa lagama maarmaan u ah xulashada alaab-qeybiyeyaasha. Iibsadayaasha B2B waxay rabaan inay dareemaan kalsooni inaad adigu ka caawisay macaamiisha sida iyaga oo kale ah - caqabado isku mid ah oo ay haystaan. Mawduuca bartilmaameed u ah shaqsiyaad gaar ah ayaa la macaamili doona iibsadahaas suurtagalka ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xiriirka shaqsiyaadka safarada iibsadaha iyo goobaha iibka
Tusaale halkan lagu muujiyo… tani waa xisaab hubin dhammaystiran oo ah dhexdhexaadiyaal iyo kanaallo si loo hubiyo in laguu arko inaad tahay shirkad ku habboon B2B inay la shaqeyso.
Xaqiijinta Xalka iyo Abuurista Wadajirka
Iibsadayaasha B2B badiyaa guddi ayaa loo kaxeeyaa. Waxaa lagama maarmaan ah inaad gacan ka geysato la xiriirida sababta aad u tahay wax soo saarka saxda ah ama adeegga ka baxsan qofka baaritaanka ku sameynaya kooxda ugu dambeyn go'aan ka gaareysa iibsiga.
Korinta - Shirkaduhu had iyo jeer ma laha miisaaniyad ama waqti ay isla markiiba ku maal gashadaan alaabtaada ama adeegyadaada. Oo iyagu ma doonayaan inay had iyo jeer la xiriiraan kooxdaada iibka halkaasoo ay iskaga furayaan codsiyo. Bixinta wargeysyo, soo dejisan, emayl, webinar, podcasts, ama habab kale si aad rajadaadu ugu sii socoto helitaanka taabtay oo saameyn ku leh iyada oo aan la iibin waa mid muhiim ah maadaama rajadu ay sii wadi doonto inay iskeed u hagto safarkooda iibsashada.
Assistance - Shirkaduhu ma rabaan in la iibiyo ee waxay rabaan caawimaad. Waxyaabaha aad ka kooban tahay miyey dadka ku kaxeeyaan iib, ama ilo ay ka caawin karto? Foomamkaaga, koodhadhkaaga, guji-si aad u wacdo, jadwal demo, iwm waa in dhammaantood loo habeeyo si loo siiyo kaalmo qiimo leh… maaha iibka adag. Ganacsiga bixiya caawimaadda ugu badan ee waxbarista rajada badanaa waa ganacsiga ku guuleysta fursadda.
Solutions - Miyaad gaar u yeeli kartaa banaan-bax badeecadeed oo u gaar ah ururka aad doonayso inaad ka iibiso? Astaamaynta isdhexgalka ama calaamadeynta xalka waxay ka caawin kartaa koox aragtida xalka aad miiska keenayso. Xitaa ka sii wanaagsan, bixinta tijaabo ama soo bandhig hordhac ah waxay dardar gelin kartaa korsashada alaabtaada ama adeeggaaga.
Samee Soo-Celin Maalgashi - Ka caawinta rajadaadu inay fahanto qiimaha markaad qeexayso dhibaatada, inaad ku dhex socoto xalka, ugu dambayntiina aad siiso badeecadaada ama adeegyadaada sida xalka ku habboon ee hadda loo baahan yahay inaad ka caawiso iyaga inay fahmaan maalgashiga iyo soo noqoshada Tani waxay xitaa ku jiri kartaa awoodda lagu qaabeeyo, qiimaha, iyo xigasho habka is-adeegga ee khadka tooska ah.
Waqtigan xaadirka ah, macluumaadkaagu waa inuu wada duubaa oo iibsadahaaga mustaqbalka waa inuu si buuxda u fahmaa haddii xalkaagu ku habboon yahay iyo in kale. Ganacsiyadu badanaa waxay ka baqayaan inay u qalmaan rajo kasta oo rajadooda ah inay iibiyayaashoodu u kacaan inay ku dhuftaan iibsadaha. Taasi waa culeys aad u weyn waana in laga fogaadaa. Calaamaddaadu waxay dhisi doontaa kalsooni dheeraad ah adoo tilmaamaya rajada xaq u xalka, maahan inaad isku daydo inaad ka iibiso badeecadaada ama adeeggaaga qof walba!
Markaad caawiso iibsadayaasha sidan oo kale, waxaad yareysaa farqiga u dhexeeya hoggaamiyeyaasha u qalma suuq geynta (MQLs) iyo hogaamiyaasha u qalma iibka (SQLs), adoo siinaya kooxdaada iibka fursad ay ku helaan xaq u iibsadaha guud ahaan dhamaadka line dhakhso.
Tags: xujob2bnuxurka b2bliiska maadada b2bsafarka iibsadayaashadaraasadoabuurid is afgaradxeeladaha suuq gaynta waxyaabahakala duwanaanshoaqoonsiga dhibaatadaaqoonsisumcaddhismaha shuruudahakhatartasahaminta xalkaansaxinta xalkaxulashada alaab-qeybiyewaraaqaha caddaanka ah
Xisaabiyaha: Xisaabi Cabirka Ugu Yar ee Ugu Yar ee Daraasaddaada
Barashada Freemium Beddelka Macnaheedu Waa Ka Hortagista Falanqaynta Wax soosaarka
Maxay idinla tahay? Cancel reply